ऋषिको निधनपछि आलियासँगै बस्न थालेका हुन् रणवीर ? – Khabar Silo
ऋषिको निधनपछि आलियासँगै बस्न थालेका हुन् रणवीर ?
बलिउड नायक ऋषि कपुरको निधनले सिंगो बलिउडलाई नै स्तब्ध बनाएको छ । रोमान्टिक हिरोको उपमा पाएकी यी कलाकारको ब्लड क्यान्सरका कारण निधन भयो ।ऋषिको निधनपछि नायक रणवीर कपुर आफ्नै अपार्टमेन्टमा फर्किएका छन् । सामाजिक संजालमा यस्तो अवस्थामा पनि उनी आफ्नी आमा नितु कपुरसँग नबसेको भन्दै आलोचना पनि भैरहेको छ ।तर, भारतीय मिडियाका अनुसार, रणवीर बाबुको निधनपछि एक्लै बस्न रुचाउँछन् । उनी, आफ्ना नजिकका साथीहरुसँग पनि निकै कम कुराकानी गर्छन् ।
भारतीय मिडियाका अनुसार, बुबाको निधनपछि रणवीर आफ्नै अपार्टमेन्टमा फर्किएको कुरा सही भएपनि उनी आलियासँग बस्न थालेको खबर भने गलत हो ।रणवीरले आमासँग नै बस्ने चाहना व्यक्त गरेका थिए । तर, आमा नितु कपुरले आफू एक्लै नै बस्न चाहेको बताएपछि रणवीर अपार्टमेन्टमा फर्किएको भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेका छन् ।
Posted on September 7, 2021 September 7, 2021 Author khabar silo
हिन्दु धर्ममा सिन्दुर विवाहित महिलाहरुको विवाहको प्रतिक हो। तर यो कुरा बुझ्न जरुरी छ की आखिर विवाहित महिलाले सिउँदोमा सिन्दुर लगाउनुको पछाडिको कारण के छ ? मान्यताअनुसार सिउँदोमा सिन्दुर लगाउनाले पतिको दिर्घायु हुने र महिलाको सौभाग्यमा वृद्धि हुन्छ। आखिर महिलाले सिउँदोमा सिन्दुर किन भर्छन त ? आउनुहोस, थाहा पाईराखौं यसको पछाडिको धार्मिक मान्यता एक पौराणिक […]
मानिसहरुले गर्नुपर्ने नित्य कर्मका बारेमा शास्त्रले नै उल्लेख गरेको पाइन्छ । हामीले मात्र अनुसरण गरे दैनिक जीवन सहज हुन्छ ।जोतिषशास्त्रलाई मान्ने हो भने रातिको समयमा पनि केही त्यस्ता काम गर्नुपर्छ जसले तपाईको घरमा सुख, शान्ति र समृद्धि छाउँछ । त्यस्तै यस्ता कामलाई नियमवद्ध अपनाउनाले घरमा सदैव लक्ष्मीको बास हुन्छ । राति घरको दक्षिण र पश्चिम […]
ढिलोमा साउन पहिलो साता विद्यालय नखुले पढाइ पूरा हुँदैन